Homeस्वास्थ्यके तपाईको बच्चा रोयो ? यसो गर्नुस्,फकाउनु पर्दैन
एजेन्सी । जब बच्चा रुन थाल्छ, आमाबुबालाई पो पिरलो । कसरी फकाउने ? मोबाइल खेलाउन दिने कि, चाउचाउ खान दिने कि, बोकेर घुमाउने कि, कथा सुनाउने ?